လမ်းပြကြယ်: ဒီအသံတွေ တနေ့ထိရောက်စေရမယ်
(18th.DEC.2011) face book ပေါ်မှ ကိုမင်းကိုနိုင်နှင့်နိုင်ငံကျဉ်းသားတို့အတွက်တောင်းဆိုမှုများ
Wishin all the best and happy birthday Ko Ko Gyi. Hope you and our 88 brothers release soon. We stand with you and Free all Burma's political prisoners!
ကိုမင်းကိုနိုင်နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကို အမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးပါ။
အပြစ်မရှိဘဲ စစ်အာဏာရှင်၏ မတရားအကျဉ်းချထားခြင်းကို ခံနေကြရသူများဖြစ်သည်။
ကဲ သူငယ်ချင်းတို့..မိတ်ဆွေတို့ရေ..စကားတခွန်းတော့ ...ကျွန်တော်တို့ ဘိုးဘွားတွေ ထားခဲ့ကြတယ်ဗျ..အဲဒါကတော့..တခုလိုချင်ရင်..တခုပေးဆပ်ကြရမယ်...အဲဒီအတွက်..ကျွန်တော်တို့ဟာ...အမှန်ကိုလိုချင်လို့...အမှားကိုလွင့်ပစ်နေကြတဲ့ သူတွေပါပဲ...အဲဒါကြောင့် အမှန်ကိုလိုချင်လို့...အမှန်တွေကိုတောင်းဆိုနေပါတယ်....ကိုမင်းကိုနိုင်နှင့်တကွ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံး အမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးပါ...တဖက်မှာတော့...အမှားတွေကိုယူလို့... အမှန်ကိုလွှင့်ပစ်နေကြတယ်...ကျွန်တော်တို့ဟာ..အမှန်တရားကို ရယူချင်တဲ့သူ အဲဒီအတွက် မှန်ကန်တဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ အမှန်တရားကိုတောင်းဆိုလို ကိုမင်းကိုနိုင်နှင့်တကွ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံး အမြန်ဆုံးလွှတ်...
ဗျို့ ...စာဖတ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ ဦးသန်းရွှေ
ခင်ဗျားမိတ်ဆွေကြီး ကင်ဂျုံအီတစ်ယောက်တော့ သေရှာပြီ
ခင်ဗျားလည်းသူ့ လို မသေခင် မှားခဲ့တာတွေ မတရားလုပ်ခဲ့တာတွေ ပြင်ပါဗျာ
ခင်ဗျား မတရားဖမ်းခဲ့သူတွေကို ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပါ
ကျုပ်တို့အစ်ကိုကြီး ကိုပေါ် နဲ့မတရားဖမ်းဆီးထောင်ချခံနေရတဲ့ (၇) ရက်သားသမီးအပေါင်း သူတော်ကောင်းတို့ ကို အမြန်ပြန်လွှတ်ပေးပါ...
ကိုမင်း ကိုနိုင်နဲ့ ယုံကြည်ချက်ကြောင့်အကျဉ်းကျနေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို
ဒီဇင်ဘာ(၁၈) ရက်နေ့မှာကျရောက်တဲ့ လေးစားရတဲ့အကို ကိုကိုကြီး၏(၅၀)နှစ်မြောက် မွေးနေ့လေးမှာ ဆုတောင်းလိုက်ပါရစေ။ အကိုကိုကိုကြီး အကျဉ်းထောင် မှ အမြန်ဆုံး ပြန်လည် လွတ်မြောက်ပြီး နောက်နှစ်မွေးနေ့တွေမှာ လွတ်လပ်စွာဖြင့် စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာစွာ နဲ့ တိုင်းပြည် အကျိုးကို စိတ်ထဲမှာ ရှိတဲ့အတိုင်း လုပ်ဆောင်ပုံဖေါ် နိုင်ပါစေ။
အာဏာရှင် မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအီ လိုမျိုး
ကိုမင်းကိုနိုင် နှင့်နိုင်ငံေ၇းအကျဉ်းသားအားလုံးကို အမြန်ဆုံးလွှတ်ပေး (1.13pm BKK 19.12.11)
ကိုမင်းကိုနိုင်နှင့် တကွ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ အားလုံး အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေ။
ကမ္ဘာ.ဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်သည်အာရပ်ကမ္ဘာတွင်တလိမ်.လိမ်.ဖြတ်သန်းနေ ပါသည်။အာရပ်နွေဦးတော်လှန်ရေးသည်တိုက်ပွဲခေါ်သံများ၊ပစ်ခတ်သံများ၊သွေးမြေကျမှု များဖြင်.အာဏာရှင်တို.အားတစ်ဦးပြီးတစ်ဦးဖြုတ်ချနေကြပါသည်။မြန်မာ.ဒီမိုကရေစီ ပြောင်းလဲမှုကိုငြိမ်းချမ်းစွာပြောင်းလဲရန်လူထုခေါင်းဆောင်မှဦးဆောင်ကြိုးပမ်းနေပါသည်။ မြန်မာလူမျိုးတို.မှာအစွန်းတရားနှစ်ပါးကိုလက်ကိုင်ထားကြသူများဖြစ်ကြသည်။လိုရာပန်းတိုင် ကို စိတ်ရှည်သီးခံစောင်.စားကြသလို၊မခံနိုင်သည်.နောက်ဆုံးတွင်အမြင်.မားဆုံးပေါက်ကွဲ မှုဖြင်.ရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်ရန်လျှောက်လှမ်းခဲ.ဘူးကြောင်းသမိုင်းစဉ်တစ်လျောက် သက်သေပြ ခဲ.ကြပြီးဖြစ်သည်။လက်ရှိအစိုးရအနေဖြင်.ပြောင်းလဲမှုကိုနှောင်.နှေးရန်မသင်.ပေ။ လူထု၏စိတ်မရှည်မှုနှင်.ဒေါသပေါက်ကွဲမှုကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန်ကိုမင်းကိုနိုင်နှင်.နိုင်ငံရေးအကျဉ်း သားအားလုံးခြွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးပါ။
သိန်းစိန် ခင်ဗျားက မြန်မာနိုင်ငံဖွင်.ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို.ကြတော..၀န်လေးနေတယ်.တစ်မြေထဲနေ၊တစ်ရေထဲသောက်၊....မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေ ကို ချမယ်၊သတ်မယ်
လိမ်မယ် ညာမယ် နိုင်ငံတော် ပစ္စည်းခိုးမယ်၊ ရဟန်းသံဃာတွေကိုသတ်မယ်၊ထောင်ထဲထည်.မယ်၊ကိုမင်းကိုနိုင်နှင်. အကျဉ်းသားတွေကို လွှတ်မပေးဘဲ ပြန်ပြီးတော. ထောင်ထဲထည်.မယ် ဆိုရင်ဝန်မလေးဘူး။ ဆန်.ကျင်ဘက်တွေကြီးထဲဘဲလုပ်တယ်....တော်လိုက်တဲ. မြန်မာပြည်ရဲ. ခေါင်းဆောင်၊ ရှေ.နွားကြီး(သန်းဆွေ)သွားရာကို နောက်နွားလေးဖြစ်တဲ.ခင်ဗျားက ဖြောင်.ဖြောင်.လိုက်တယ်နော်..ဖအေတူသားဆိုတာ အဲဒါနေမှာ..အစကတော.မသိဘူး...စကားပုံထဲမှာဘဲ ရှိတယ်ထင်နေတာ..အော် ခုမှဘဲအပြင်မှာတကယ်ရှိတယ်ဆိုတာ သိတော.တယ်...ဒီတော..အရင်မင်းသန်းဆွေမကောင်းဘူးဆိုရင်လဲ ခင်ဗျားက အရင်မင်းရဲ..မကောင်းတာတွေကို ပပျောက်အောင် လုပ်ပြီးတော..ကိုမင်းကိုနိုင်နှင်.အကျဉ်းသားတွေကို အမြန်ဆုံးလွှတ်ပးပါ..နိုင်ငံတော် ဖွင်.ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်ပါ...စစ်မှန်တဲ. ဒီမိုကရေစီကို အမြန်ဆုံး အကောင်အထည်ဖော်ပါ... ကျော်ကြီး.....
ဘယ်သူတွေကို လွှတ်ပေးစေချင်သလဲ ၊ ဘာ့ကြောင့်လဲ လို့ဦးရွှေမန်းက မေးလာရင် .......ကိုမင်းကိုနိုင် နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အားလုံးကို လွှတ်ပေးပါ။ အတိုက်အခံ အားကောင်းမှ တိုင်းပြည်တိုးတက်မယ်လို့ ယုံကြည်သောကြောင့် ဖြစ်တယ်။
Ma Nandarကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို အမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးပါ (2011.DEC.19) 10:48pm Japan Standard Time.
ကိုမင်းကိုနိုင် နှင့်နိုင်ငံေ၇းအကျဉ်းသားအားလုံးကို အမြန်ဆုံးလွှတ်ပေး.....လွှတ်ပေး....လွှတ်ပေးပါ.....
ကိုမင်းကိုနိုင် အပါအဝင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေချက်ချင်းလွတ်ပေးပါ
အာဏာရှင်တစ်ယောက်တော့သွားရှာပြီးနော်၊ မြန်မာပြည်ကအာဏာရှင်ကြီးတို့ရေ တတိုင်နောက်ကသံတိုင်ကြားက ငါတို့ရဲ့ ယုံကြည့်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျနေတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိအမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးပါတော့။